Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 5th November 2018. | MINYENGETERO MARI
musha Urongwa hwekuverenga Bhaibheri Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 5th November 2018.
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 5th November 2018.
Kuverenga kwedu Bhaibheri zuva nezuva kwanhasi kunobva mubhuku ra2 nhoroondo 33: 1-25. Verenga uve wakaropafadzwa.
2 Makoronike 33: 1-25:
1 Manase akatanga kubata ushe ava namakore gumi namaviri, akabata ushe paJerusaremu makore makumi mashanu namashanu. 2 Asi akaita zvakaipa pamberi paJehovha, akatevera zvinonyangadza zvavahedheni, vakanga vadzingwa naJehovha. pamberi pavana vaIsiraeri. 3 nekuti akavakazve matunhu akakwirira, akanga aputswa nababa vake Hezekia, akavakira Bhaari aritari, akavezwa matanda okunamata nawo, akanamata pasi pehondo dzose dzokudenga, akadzishumira. 4 Akavakawo aritari mumba maJehovha, kunyange Jehovha akati, PaJerusaremu ndipo pachagara zita rangu. 5 Akavakira hondo dzose dzedenga aritari muvazhe mbiri dzeimba yaJehovha. 6 Akafambisa vana vake mumoto pamupata womwanakomana waHinomi, akatarisisa nguva, akapuka, nokupuka, akabata mweya yakaipa, navaroyi, akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha. kuona kwaIshe, kumutsamwisa. 7 Akagadzirawo mufananidzo wakavezwa, icho chifananidzo chaakanga agadzira, mumba maMwari, makanga muudzwa Mwari naDhavhidhi naSoromoni mwanakomana wake, kuti, Mumba muno, nomuJerusaremu, vandakatsaura pamberi pamarudzi ose. ndichaisa zita rangu nokusingaperi, uye handingazobvisizve rutsoka rwevaIsraeri kubva panyika yandakatsaurira madzibaba ako; kuti vachenjerere kuita zvose zvandakavaraira, nomutemo wose, nezvakatemwa, nezvakatemwa, nomuromo waMosesi. 9 Naizvozvo Manase akakanganisa Judha navagere Jerusaremu, vakaita zvakaipa kupfuura zvakaitwa nendudzi dzakange dzaparadzwa naJehovha pamberi pavana vaIsiraeri. 10 Zvino Jehovha akataura naManase nevanhu vake, asi vakaramba kuteerera. 11 Naizvozvo Jehovha akauyisa pamusoro pavo vakuru vehondo yamambo weAsiria, akabata Manase pakati pemhinzwa, akamusunga namaketani, akaenda naye Bhabhironi. 12 Zvino wakati achitambudzika, akakumbira kuna Mwari wake, akazvininipisa kwazvo pamberi paMwari wamadzibaba ake, 13 akanyengetera kwaari, akanyengetera kwaari, akati anzwa kukumbira kwake, akadzosa Jerusarema. muumambo hwake. Ipapo Manase akaziva kuti Jehovha ndiye Mwari. Zvino shure kwaizvozvo akavaka rusvingo kunze kweguta raDhavhidhi, kumavirira kweGihoni, mumupata, kusvikira pavanopinda napo pasuwo rehove, akakomba paOferi, akarikudza rakareba kwazvo. isa vakuru vehondo mumaguta ose akakomberedwa aJudha. 15 Akabvisa vamwari vavatorwa, chidhori icho mumba maJehovha, nearitari dzose, dzaakanga avaka mugomo reimba yaJehovha, napaJerusaremu, akavadzingira kunze kweguta. 16 Akagadzirawo aritari yaJehovha, akabayira pamusoro payo zvipiriso zverugare nezvipiriso zvekuyananisa, akaraira Judha kuti ishumire Jehovha Mwari waIsraeri. 17 Kunyange zvakadaro vanhu vakaramba vachibayira pamatunhu akakwirira, asi kuna Jehovha Mwari wavo chete. 18 Zvino mamwe mabasa aManase, nomunyengetero wake kuna Mwari wake, namashoko evatariri, vaakataura naye muzita raIshe, Mwari waIsiraeri, akanyorwa mubhuku yaMadzimambo aIsiraeri. . 19 Munyengetero wake, uye kuti Mwari akanzwirwa sei naye, pamwe chete nechivi chake, nokudarika kwake, nenzvimbo kwaakavaka nzvimbo dzakakwirira, akaisamo matanda okunamata nawo mifananidzo yakavezwa, asati azvininipisa. Mashoko evaoni. 20 Ipapo Manase akavata namadzibaba ake, vakamuviga mumba make, Amoni mwanakomana wake akamutevera paushe. Amoni akatanga kubata ushe ava namakore makumi maviri namaviri akabata ushe paJerusaremu makore maviri. 22 Asi akaita zvakaipa pamberi paJehovha, sezvakaita Manase baba vake. Amoni akabayira mifananidzo yose yakavezwa, yakanga yaitwa naManase baba vake, akavashumira. 23 Haana kuzvininipisa pamberi paJehovha, sababa vake Manase sezvaakazvinatsa. asi Amoni akaramba achingodarika. 24 Varanda vake vakarangana vakamumukira, vakamuuraya mumba make.
Previous nyayaKuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 4th November 2018.
inoteveraKuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 6th November 2018.
Kununura Munamato kuputsa kutuka kwemhuri
15 minamato manongedzo inopesana nemidzimu inodzivisa